Xiaomi Mi Kids Watch 4 sy 4 Pro, famantaranandro ho an'ny ankizy vaovao miaraka amin'ny efijery AMOLED sy fifandraisana 4G | Androidsis
Xiaomi tao amin'ny Mi Festival Fan dia nanapa-kevitra ny hanolotra vokatra marobe, anisan'izany ny tsia We Band 5 amin'izao fotoana izao, tarika marani-tsaina izay nantenain'ny rehetra. Ny orinasa inona eny dia nanambara fa famantaranandro vaovao roa ho an'ny faralahy ary amin'ny vidiny antonony.
Saingy tsy izy irery no nambara, fa naneho ny headphones vaovao Mi Airdots 2s, tonga lafatra ho an'ireo izay mitady fahaleovan-tena maharitra. Manaraka ny Tarika Redmi, nanokatra ny smartwatch Xiaomi Mi Kids Watch 4 ary Xiaomi Mi Kids Watch 4 Pro ho tonga any Chine izany amin'ny voalohany.
1 Endri-javatra amin'ny Xiaomi Mi Kids Watch 4 sy 4 Pro
2 Fifandraisana maro
Endri-javatra amin'ny Xiaomi Mi Kids Watch 4 sy 4 Pro
Raha jerena voalohany dia mitovy ny roa, fa misy fahasamihafana kely eo amin'ireo maodely roa. Samy manana efijery AMOLED 1,78-inch miaraka amin'i Gorilla Glass 3 ary vahaolana 368 x 448 teboka. Ny kalitaon'izy ireo dia ankasitrahana ary mampanantena izy fa ho smartwatch maharitra.
Ny processeur an'ny maodely roa dia ny Qualcomm Wear 2500, fantatra fa nitaingina fiambenana hatramin'ny nanambarany tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny taona 2018. Ny tahiry dia 8 GB, miakatra 1 GB RAM ary bateria 920 mAh. Ny Mi Kids Watch 4 sy 4 Pro dia mamela ny fametrahana fampiharana fandefasan-kafatra sy fanabeazana.
El Xiaomi Mi Kids Watch 4 mametraka fakan-tsary 5 megapixel eo an-tampon'ny efijery ho an'ny kaonferansa video ary ny iray hafa eo aloha handray sary 5 megapixel. ny Xiaomi Mi Kids Watch 4 Pro mametaka fakan-tsary eo ambonin'ny efijery 5 MP ho an'ny kaonferansa horonantsary ary fakan-tsary 8 megapixel eo aloha ho an'ny sary.
ny Ny My Kids Watch 4 sy 4 Pro dia hanana fifandraisana 4G VoLTE (eSIM), Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS + BEIDOU ary NFC. Ny AI an'ny Watch 4 dia hilaza amintsika ny toerana misy ny zanakay lahy ao an-trano sy any ivelany, ny 4 Pro dia manambara sensor GPS misy tarika roa ho an'ny fahamendrehana bebe kokoa araka ny nambaran'i Xiaomi ihany.
ny Xiaomi Mi Kids Watch 4 sy 4 Pro ho hita any Chine avy any 9 aprily amin'ny loko manga sy mavokely. Ny vidin'ny maodely Mi Kids Watch 4 dia CNY 900 (117 euro hanovana) ary ny Mi Kids Watch 4 Pro dia CNY 1.300 (168 euro).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Xiaomi Mi Kids Watch 4 sy 4 Pro, famantaranandro ho an'ny ankizy vaovao misy efijery AMOLED sy fifandraisana 4G
Freemium Cats & Magic no lalao manja indrindra izay hitanao
Midira amin'ny orinasa amin'ny lalao fandrahoan-tsakafo Cooks Be loatra